HOYA LINEARIS - DARYEELKA IYO DHALMADA GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Hoya Linearis - qaababka koritaanka iyo daryeelka
Hoya linearis waa dhir aad u qurxoon, oo si khafiif ah uga soo laalaaban dheriga. Waxaa loo magacaabay ka dib markii beerta beerta Thomas Hoya, oo xannibay dhirta kulaylaha ee maxkamada Duke ee England. Xaaladaha dabiiciga ah waxay ku koraan gobollada buuraleyda ah ee Nepal, Shiinaha, India, Burma.
Hoya linearis ma laha nidaam xidid awood leh - waxay ku ballaarantaa ballaaran, ma aha mid qoto dheer.
Marka aad dooranayso dheriga, waxa ugu wanaagsan in la siiyo doorbidid weel balaaran - tani waxay u oggolaanaysaa in jeexjeexyada ay ku qaadaan xididada kale.
Ubaxa wuxuu soo saaraa dherer dhaadheer ah oo la soo saaro ilaa 6 mitir iyo gebi ahaanba daboolay caleemo.
Isku dheji, hoos u dhac, ku saabsan 5 cm dheer iyo 5 mm qaro weyn. Cawska waa gaaban, ku dhawaad ​​aan la qiyaasi Karin marka hore. Midabka - cagaarka-cagaaran, caleemaha yaryar marka hore waxay u egtahay caddaan.
Creamy huruu, hoos. Sida caadiga ah gudaha wax kasta oo inflorescence ah waxaa jira qiyaastii 12 ubax, taas oo ah 1 cm dhexroorka, urta waa mid xoog leh, oo qurux badan, xusuusta vanilla ama ubax. Inflorescences Hoya muuqaalka on talooyinka of afkoda, iyo ka dib markii ubax ay hoos u dhaco.
Ubax Tani uma baahna fiiro gaar ah iyo abuurista xaalado gaar ah.
Gooyn Rooted waxaa lagu beeray dheriyo yar yar (inta badan 9 cm dhexroor)kaas oo ciidda waxaa lagu shubay qayb ka mid ah sodaad iyo ciid, laba qaybood oo ah dhul caleen ah iyo badh ka mid ah khudaarta.
Inta badan jaaliyadaha dhallinyarada ah waxaa lagu iibiyaa dukaanka leh substrate gaar ah. Marka la eego, waxaa lagula talinayaa in lagu bedelo dhawr maalmood ka dib iibsashada.
Warshad qaangaar ah ayaa lagu beeraa marka xididdadu si buuxda u buuxiyaan dheriga hadda jira.
Waxa ugu wanaagsan in la sameeyo tan bishii Abriil, mar 2-3kii sanoba mar. Si kastaba ha noqotee, ubax badani waxay u dhacdaa si qaas ah oo ku jira dherooyin adag.
Hoya waxay u baahan tahay carrada lagu neefsado oo biyo fiican leh. Markaad isticmaashid carrada caalamiga ah, waxaa ugu wanaagsan in la isku daro perlite leh peat ama ciid. Diyaargaroowga gacanta waxaa lagama maarmaan ah in la qaato 1 qayb oo ciid ah, 2 qaybood oo ah sodan iyo khudaar iyo 3 qaybood oo ah dhul caleen ah.
Wuxuu jecel yahay waraabin badan iyo qoyaangaar ahaan inta lagu jiro xilliga koritaanka firfircoon. Si xun ayaa ujirta qalajinta dhamaystiran ee miyir-beereedka - inta lagu jiro ubax tan waxay keeni kartaa dhibic buuxa ee burooyinkeeda. Xilliga xagaaga, muddada biyo-qaadintu waa inay ahaataa ugu yaraan 1 jeer toddobaadkii, xilliga qaboobaha waxaa lagu xaddidaa 1 mar 2 toddobaad. Isla mar ahaantaana, joojinta biyaha waa in aan loo oggolaan - tani waxay horseedaysaa burburka nidaamka xididka iyo dhimashada geedka.
Hoya waxay jecel yihiin qoyaan, sidaas darteed waxay u baahan tahay in lagu buufiyo biyo kulul 1 mar 2 todobaad. Haddii ubaxa uu ku koray cabbir adag, markaa si tartiib ah ayaad ugu qubeysan kartaa qubeyska.
Geedka wuxuu jecel yahay iftiin dhalaalaya, taas oo ka qayb qaadata tayada ubax, si kastaba ha ahaatee, iyada oo aan wax dhibaato ah, waxay ku kori doontaa hooska qayb ahaan. Waxaa habboon in dheriga koonfureed ama koonfur-galbeed, xagaaga, oo weliba ay ka ilaaliyaan raajooyinka tooska ah ee gubanaya. Mudada ugu fiican maalinta iftiinka hoi - 14-16 saacadood - xilliga jiilaalka waxaa haboon in la daryeelo iftiin dheeraad ah.
Heerkulka caadiga ah +24 digrii xagaaga. In hawada kulul iyo hawada kulul caleemaha caleemaha iyo si tartiib tartiib ah u dhaco. Xilliga jiilaalka, nabadgelyo ayaa ka bilowda Hoija Linearis, waa muhiim in la hubiyo heerkulka halkan. hawada qiyaastii 15 darajo. Sida dhirta kudheerta ah, ma jecla heerkulka hoose - waxay si xun u saameysaa nidaamka xididka. Waxaa lagugula talinayaa inaad si joogto ah u hawoqoto qolka, halka ubaxa aysan aheyn in lagu qoro.
Inta lagu jiro muddada ubax, geedka waa in lagu quudiyo bacriminta macdanta. mar 2-3 todobaad kasta. Ha u qaadin inad qaaddo oo aad sameyso habka marar badan.
Waxaa laga yaabaa in gooyn iyo abuur. Marka faafin by by gooyn, waxaa fiican in la isticmaalo sprout ee sannadkii hore, taas oo ay jiraan waa in dhowr xabbadood oo caleemo.
Iska dhig cutubka hoostiisa, dhererka ugu fiicani waa 10-15 sentimitir.
Wixii rooting ah jirida waxaa la gelin karaa koob balaastig ah oo biyo ah oo suga muuqaalka xididada.
Seeds lagu beeray beerto waa inay noqotaa mid cusub.. Kaji ka dib markii la beero ka dib ayaa si dhakhso ah u muuqata, muddadaasna waxay u baahan tahay daryeel korodh. Waa lagama maarmaan in la bixiyo iftiin fiican, heerkul deggan, iska ilaali buuxda ama qalajinta.
Iyadoo daryeel aan yareyn iyo u hoggaansamida shuruudaha waraabinta iyo heerkulka, waxay badanaa u dillaacdaa oo si ikhtiyaar ah, laga bilaabo Julaay ilaa Oktoobar. Ka dib markay dhacaan.
Uma baahnid dhisitaanka manjooyin, sababtoo ah Hoya linearis ayaa ku duuban oo kaliya dhinaca dhamaadka laanta. Jarjadu waxay macno u sameeyaan haddii la qalajiyo, ama si loo yareeyo goynta.
Ubaxa waxay leeyihiin urka nacniga aad u fiican.
Waxay ku xiran tahay waxyaabo badan - heerkulka qolka, xoogga iftiinka, quudinta. Celcelis ahaan, waxay noqon kartaa 15 ilaa 45 sentimitir sanadkii.
Warshadu waa hal sano.
Hababka daaweynta iyo halganka
Daryeelka habboon, waxaa dhif ah walwal walaac leh milkiilaha.
Dhibaatooyinka oo dhan waxaa badanaa la xiriira xadgudubyada xaaladaha xabsiyada:
Caleemaha Jaalaha ah - calaamad muujinaysa isbeddel muuqda ee heerkulka, waraabinta biyo qabow, biyo diirsan oo biyo leh oo joogta ah oo xididdada ku jira. Waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo heerkulka cimilada xasilloon, oo sare u qaadda inta jeer ee waraabinta;
Maqnaanshaha caleenta - waraabin xad dhaaf ah. Inta badan tani waxay dhacdaa xilliga jiilaalka, marka badanaa, waraabinta badan oo sii socota;
Bloom caddaan ah ayaa u muuqata caleemaha. - calaamad u ah cudurka fungal. Waxaa lagula talinayaa in aad diyaariso warshad qubays ah, ku buufin oo ka ilaali carrada inaad acidification. Bloomka jira waxaa lagu maydhin karaa jilicsan jilicsan oo lagu daaweeyo fungicides;
Xaaladaha Brown ee caleemaha - jabinta dhirta by cayayaanka, qolof ama thrips. Daaweynta waxaa la sameeyaa oo kaliya marka la isticmaalo sunta cayayaanka.
Isku darka Hoy Linearis wuxuu bixiyaa dhadhan raaxo leh, iyo waxay u adeegtaa sida quruxda fiican ee guriga. Si aad u daryeesho looma baahna inay sameyso dadaal culus, waxa ugu muhiimsan waa in la waafajiyo shuruudaha heerkulka iyo waraabinta.
Marka xigta waxaad arki doontaa sawirka Hoya Linearis: